मस्तिष्क विकास गर्ने केही यस्ता ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ ! - Dainik Nepal
मस्तिष्क विकास गर्ने केही यस्ता ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ !
सुर्य नेपाली २०७५ भदौ २५ गते १३:२७
काठमाडौं । मानो डे बाल्जक एक फ्रान्सेली लेखक थिए । उनले कफी एक बौद्धिक विकासको महत्वपूर्ण पेय पदार्थ हो भन्ने कुरामा निकै विश्वास राख्थे । किनकी उनी स्वयम पनि निकै कफी पिउँथे । कफी पिउने उनको शारिरीक तथा मानसिक अवस्थाकै आवश्यकता स्वरुपको रुटिङ थियो । पेरिसनेर मध्यरातमा खुल्ने एउटा कफीशप थियो । त्यो बिहानसम्म खुल्थ्यो । उनी मध्यरातदेखि विहानसम्म नै त्यही कफीशपमा बसेर लेख्ने गर्थे । उनले त्यो समयावधिसम्म ५० कप भन्दा धेरै कफी पिउँथे ।
कफी पिउने उनको आदात मात्र नभएर त्यसलाई एउटा रुटिङ नै निर्माण गरेर उनी कफी पिउँथे । त्यतिमात्र होइन उनले पिउने कफीको मात्र दिनानुदिन बढाउँदै पनि लगिरहेका थिए । उनले कफी नपिएको वेला उनी लेख्न नै बस्दैनथे । त्यस्तो वेला उनले कफी मुखमा राख्थे । यस्तो वेलामा सैनिकको बटालियनले जत्तिकै छिटो हात र दिमाग चल्ने उनी बताउँथे । उनले आफू बाँचुन्जेल एक सय भन्दा बढि औपन्यासिक कृतिहरु लेखे भने कयौ नाटकहरु पनि लेखे । मुटु फेल भएका कारण उनीको ५१ वर्षमै निधन भयो तर उनको दिमाग जति चल्थ्यो त्यो कफी कै कारण भएको उनको विश्वास थियो ।
सायद त्यो समयमा अन्य ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ को विकास भएको थिएन । मानिसहरु फ्रेस हुनको लागि कफी, चिया वा यस्तै केही पेय पदार्थ पिउँथे । यद्दपी अल्कोहलिक पदार्थको भने छुट्टै कथा छ । त्यसवेलाका केही सताब्दीहरुमा कयौं कम्पनीहरुले आफ्ना कामदारहरुलाई दिक्क लागेका वेला ‘ओल्ड कफिन’ खान प्रेरित गर्थे भनिन्छ । तर आज त्यस्तो छैन । किनकी थुप्रै यस्ता ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ हरु पत्ता लागिसकेका छन् जसले दिमागको विकासका लागि निकै भुमिका खेल्छ भन्ने वैज्ञानिकहरुको विश्वास छ । किनकी पुष्टि समेत भएको छ नै त्यस्तै ।
अब चर्चा गरौं आधुनिक पछिल्ला सताब्दीहरुमा प्रयोग हुने गरेका स्वस्थ्यलाई फाईदा पुग्ने भनिएका ती ‘स्मार्ट ड्रग्स्’ भनेका के–के हुन्, यसको प्रयोगले शरिरको कुन–कुन भागलाई फाइदा पुग्छ वा हानी वा साईड इफेक्ट के छ ?
उत्तेजना कम गर्ने
रोमानियाका वैज्ञानिक कर्नेलिय गियगेले ‘स्मार्ट ड्रग’ सन् १९६० को दशकमा पत्ता लगाएका हुन् । यी वैज्ञानिक त्यतिवेला एउटा यस्तो रसायनको खाजीमा थिए जसले मानिसलाई निद्रा लागेको अनुभव दिलाओस् । कयौं महिनाको टेस्टपछि उनले कम्पाउण्ड ६२१५ नामको पदार्थ पत्ता लगाए । यसको साइड इफेक्ट अत्यन्तै कम थियो । यो सुरक्षित पनि थियो तर यसले अपेक्षित काम भने गरेन ।
पछि पिरासेटम पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ केही साइड इफेक्ट देखियो । तर केही महिनाको मेहनतमा पिरासेटम केही बिरामीमा परिक्षण गरियो । र त्यसले काम पनि गर्यो । त्यसपछि तत्काल यसलाई आधिकारीकता दिइयो । शुरुमा यसलाई नुट्रोपिक नाम दिइएको थियो । जसको अर्थ माइन्ड बेन्डिङ भन्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय पिरासेटम विद्यार्थी तथा युवा प्रोफेस्नलमाझ लोकप्रिय नै देखिन्छ । यसलाई शारिरीक तथा मानसिक प्रदर्शन बढाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यद्दपी अझैपनि यसका शारिरीक र मानसिक क्षमता बढाउँछ भन्ने पर्याप्त प्रमाणहरु भने नभएको बताइन्छ ।
यो झण्डै पिरासेटम जत्तिकै हुने र सबै प्रकारका गुणहरु पिरासेटमसँग मिल्ने प्रकारको स्मार्ट ड्रग भएको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । फिनाइल पिरासेटम विशेषगरी शरिरीक विकासका लागि राम्रो मानिन्छ । बोडी बिल्डर्सहरु यस्तो प्रकारको ड्रग प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सेनारियो साधारणतः पूर्ण ‘स्मार्ट ड्रग’ हो । यसले दिमागलाई कम एक्साईटेड बनाउन सहयोग गर्छ । यसको नियमित प्रयोगकर्तालाई दिमाग ओभर एक्साईटेड हुनबाट रोक्छ वा पुरानै अवस्थामा हुन्छ ।
सुस्तबाट सक्रिय दिमाग बनाउन पनि कयौं ‘स्मार्ट ड्रग’ पत्ता लागेका छन् ।
यो सिधै खान सकिने प्रकारको ‘स्मार्ट ड्रग’ हो । यो हेर्दा सेतो धुलो हुन्छ । यसलाई दुध वा चिनीजन्य पदार्थसँग मिलाएर खान सकिने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यसले मस्तिष्कको काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
इप्सोस पब्लिक एफेयर्सले गतवर्ष गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार २२ प्रतिशत युवाहरुले यसलाई आफ्नो खेलको विकासका लागि लिने गरेको बताएका थिए । “यसको असर यति हुन्छ की खेल मैदानमै तत्काल खेलाडीको प्रदर्शन फरक पर्ने हुन्छ”, उनीहरुको दाबी छ ।
सानफोर्ट विश्वविद्यालयका न्युरोवैज्ञानिक भन्छन्, “मेरो विचारमा यो प्रष्ट छ की केही गर्नुपर्छ कामका लागि ।”
यो एक लामो समयसम्म पनि काम गरिरहने ‘स्मार्ट ड्रग’ हो । एक जना गणितज्ञ पउल इर्डोस्ले यस्ता ड्रग लिएका थिए जब उनले गणित किताब लेख्न शुरु गरेका थिए । उनले एकैपटक दुईओटा किताब लेख्दा उक्त ड्रग प्रयोग गरेको बताए ।
यी ‘स्मार्ट ड्रग’ हरुले मन्द रुपले काम गर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । जसले दिमागको विकासमा सहयोग गर्दछ ।
विशेषगरी गणितीय दिमाग बढाउन र त्यस्ता कुराको खोजका लागि रिटालिन लिने मानिसहरु पनि छन् । यसले गणितका रोचक कुरा खोज्न दिमागलाई केन्द्रित गर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
आधिकारीक सल्लाह र सुझाव विना प्रयोग गर्नु अर्को महाहानी हो । प्रोफेसनल व्यक्तिको उचित सल्लाह, शारिरीक अवस्था तथा के का लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे खुब प्रस्ट हुनुपर्ने स्वयम ‘स्मार्ट ड्रग’ पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरको सुझाव छ ।
अधिक मात्राले ‘स्मार्ट ड्रग’ हुँदैन त्यो ‘स्टुपिड ड्रग’ हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष असर पार्दछ । र अन्तमा यसले एडिक्टेड बनाउने समेत वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । अतः होसियारी हरेक कुरामा अपनाउनु पर्दछ चाहे त्यो बढि मात्रा होस् या कम नै किन नहोस् ।
प्रायः ‘स्मार्ट ड्रग’ हरुकै पनि कयौ साइड इफेक्ट हुन्छ । यद्दपी राम्रो कै लागि प्रयोग गर्ने न हो । तर कुनैपनि ‘स्मार्ट ड्रग’ प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले त्यसको साइड इफेक्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने कतिपय वस्तुहरु पनि ‘स्मार्ट ड्रग’ जस्तै नै हुन्छन् । कतिपयलाई त्यहि कुराले फाईदा भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई असर । अतः दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने पेय पदार्थ देखि खाने वस्तुमा पनि ‘स्मार्ट युजर्स’ बन्न सक्नुपर्छ ।
चीनले बनायो विश्व चकित पर्ने रोबोट
जापानको एउटा टापू समुद्रमुनि बिलय